Kenya oo ka mamnuucday Dalkeeda inuu soo galo Madaxa Sirdoonka NISA. – Hornafrik Media Network
Dowlada Kenya ayaa si rasmiya Laamaha Socdaalka Dalkeeda iyo Safaaradeeda Muqdisho ugu wargalisay inaan la siin karin Dal Ku Gal Madaxa Qaybta Sirdoonka NISA, Zakariyo Axmad Ismaaciil (Zaki) oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay. Waxayna Kenya ku eedeeysay Zakariye inuu si toos ah iyo si aan toos ahaynba uga qayb qaatay Weeraro iyo Shirqoolo lagu kala dilay Saraakiil Amni oo Kenyan ah Gudaha Kenya iyo Somalia.
Zakariye oo isla Xilkan looga magacaabay Nabadsugidda Somalia mid la mida ka hayay Alshabab Sannado ka hor ayaa noqday Qofkii ugu horeeyay ee Alshabaab ka soo goosta oo Xil heerkaas le’eg looga magacaabo Sirdoonka Somalia. Waxaana Magacaabistiisa ay wel wel ku abuurtay Sirdoonadda Caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Xarunta Xalane ee Muqdisho oo durba billaabay inay joojiyaan Wadashaqayntii ay la lahaayeen Qaybta Sirdoonka ee NISA.
Tallaabadan ay Kenya ku mamnuucday inuu Dalkeeda ku soo gallo Madaxa Qaybta Sirdoonka NISA oo Shaqooyinka ugu badan u tagga Nairobi waxay caqabad ku noqonaysaa Habsami u socoda Qaybtaasi oo Macluumaad ay si joogto ah isku dhaafsan jireen Sirdoonadda Dalalka Gobalka.